FENOARIVO ANTSINANA : Olona miisa 5 nahatrarana vola sandoka 20 tapitrisa Ariary
Vokatry ny loharanom-baovao voaray avy amin’ireo olona tsara sitrapo dia nahazo vokatra tsara ny Zandarimaria tao amin’ny Distrikan’i Fenoarivo Antsinana mahakasika ilay vola sandoka an-tapitrisany maro, ny 15 oktobra 2019 lasa teo. 17 octobre 2019
Raha ny tatitra voarain’izy ireo dia fantatra fa nisy andian’olona mitondra vola sandoka 400 tapitrisa Ariary , saika hoentina any Vavatenina. Avy hatrany dia nanao fitsirihana sy ny nidina ifotony ny Zandary, natao ny sakana sy ny fitsirihana rehetra ka tsy ela dia tratra ny fiara tsy mataho-dalana iray izay nitondra izany. Nandritra ny fisavana natao tokoa dia sarona tao ny vola sandoka mitentina 20 tapitrisa Ariary niampy vola tena izy mitentina 80 tapitrisa Ariary.
Miisa 05 hatreto ny olona efa voasambotra izay nitondra sy niray tsikombakomba tamin’ity raharaha ity . Mitohy kosa ny fikarohana ny ambin’ilay vola sandoka nafenina ao an-tranon’izy ireo ary koa fantarina ny hevi-dratsy ambadika saika hampiasana ireo vola sandoka ireo. Andalam-panatanterahana ny famotorana lalina araka izany ny eo anivon’ny Zandary ka arahina akaiky ny fizotran’ny raharaha amin’izao fotoana izao.